Robotics Jumlo & Soo-saare iyo Alaab-qeybiye | Saxnimada QY
Gacmaha Robotikku waa aaladaha farsamaysan ee si toos ah loo isticmaalo marka loo eego dhinaca tignoolajiyada robotiga. Waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka warshadaha, daaweynta caafimaadka, adeegyada madadaalada, militariga, wax soo saarka semiconductor, iyo sahaminta meel bannaan.Qaybaha gacanta robotku waxay tixraacaan qaybaha la isticmaalo ee ku urursan cududda robotiga. Qaybaha gacanta robotku waxay u baahan yihiin saxsanaan sare, oo inta badan laga sameeyo silikoon, naxaas, aluminium aluminium, birta shubka, birta caaryada, birta, balaastikada, iwm. Waxay u baahan tahay farsamo iyo farsamo sax ah.
Marka laga eego aragtida qaybaha saxda ah ee farsamaynta iyo tignoolajiyada wax soo saarka ee alaabada smart, ku habboonaanta tikniyoolajiyada farsamaynta qaybaha casriga ah iyo tignoolajiyada qaybaha saxda ah waxay ku lug leeyihiin cilmi baarista iyo horumarinta alaabada smart, naqshadeynta habka, wax soo saarka iyo iibinta. Waxay yihiin kuwo isku dhow oo is dhex galiyay. Inta lagu jiro habka wax-soo-saarka, farsamayaqaannadu waa inay hubiyaan in dhammaan isku-xirayaashu ay sax yihiin. Haddii ay dhibaato ka jirto mid ka mid ah xiriirinta qayb ka mid ah CNC, waxay u badan tahay inay saameyn ku yeelato codsiga dhammaan tignoolajiyada farsamaynta qaybta saxda ah ee habka wax soo saarka, taas oo si dhab ah u saameynaysa heerka processing iyo tayada alaabta smart.
Waxaa jira shirkado badan oo naqshadeeya oo ku hawlan robots caqli badan, sidoo kale waxaa jira warshado farsameeya qaybo badan oo sax ah oo ku hawlan farsamaynta qaybaha saxda ah ee robot-ka, sidoo kale.
Sidaa darteed, aad bay muhiim ugu tahay shirkadaha naqshadaynta robot-ka ee caqliga leh inay helaan xirfadle iyo warshado farsamaynta qaybaha makaanikada ee saxda ah oo la isku halayn karo si ay u siiyaan taageerada adeegyada habaynta qaybaha aan caadiga ahayn. Doorashada alaab-qeybiyaha noocaan ah ee ka mid ah warshado badan oo saxan qaybaha mishiinada waa inay taxaddaraan, maaha oo kaliya qiimaha, laakiin sidoo kale si loo qiimeeyo heerka adeegga guud ee warshadan. Waxa ugu muhiimsan ee ka shaqeynta qaybaha aan caadiga ahayn waa tayada. Tayadu ma fiicna, Robot-kii caqliga lahaa ee ugu dambayntii suuqa la galiyayna waa in uu macmiilku soo celiyo. Kadibna waxay noqon doontaa khasaare culus shirkadda naqshadeynta. QY Precision waa doorashadaada ugu fiican.
QY Precision waxay khibrad qani ah u leedahay habaynta qaybahan oo kale, soo dhawoow noo soo dir sawiradaada si aad u soo xigasho.
Hore: Dhamaystir dusha sare
Xiga: Qalabka saxda ah
Qaybaha birta ah ee birta ah